चिन्डो चर्चा : सुम्निमा–पारुहाङको पालादेखि चिन्डो प्रयोग « Tuwachung.com
२. यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ १ देखि २९ सम्म)
३. एसएलसी उत्तीर्ण गर्दा मेयर रिजालको हातमा १३ लाख
४. ‘महिनामा दुई किताब पढ्ने योजना बनाएको छु’
५. गीतकार मेयर : हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको नगरगान तयार
६. चारतारे झन्डा फरर्र मदनको आँसु बरर्र
७. मेयर साप, हामीले औंसीमा पनि जून देख्यौं
९. दम, मुटु, ग्यास्ट्रिक, चर्मरोग निको पार्ने विजयसाल
१०. पृथ्वीकै प्राचीन मानव बस्ती पेकिङ
११. निङ्गुरोले बचाएको ६५ वर्षीया विश्वकर्माको ज्यान
१२. मलेसियाबाट फर्केर कागती खेतीमा रमाउँदै रुकुमका खड्का
चिन्डो चर्चा : सुम्निमा–पारुहाङको पालादेखि चिन्डो प्रयोग
चन्द्रकुमार हतुवाली	२०७६ चैत्र २७, ००:०१
चिन्डो लहरा जातको एकप्रकारको बिरुवा हो । यसको फर्सीजस्तै लहराको बीच भागमा फल लाग्छ । यो लौका जातसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । बोट त लौकासँग ठ्याक्कै नै मिल्दोे हुन्छ, सहजले छुट्याउन सकिँदैन । चिन्डो वा लौकाको बोट के हो त ? भनेर छुट्याउनका लागि पात वा डाँठ चिमोट्नुपर्छ । यदि चिन्डोको बोट भएमा नमीठो गन्ध आउँछ, जुन गन्ध लौकाको बोट र पातबाट आउँदैन । त्यसरी नै लौकाको तरकारी खान मिल्छ भने चिन्डोको तरकारी खान मिल्दैन । बरु चिन्डोलाई छिप्पिएपछि भेट्नो भएतिर काटेर मुख निकालेर आवश्यकताअनुसार पानी वा अन्न जातको चीजबिज राख्ने भाँडाका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । नेपालको सुदूरपश्चिमवासीले भने कम्मरमा चिन्डो बाँधेर बर्खामास खोला तथा नदी तर्न प्रयोग गर्ने गरेकोे समाचार टेलिभिजन प्रसारण हुने गरेको छ ।
किरात राई जातिमा भने चिन्डोको विशेष स्थान रहेको हुन्छ । चिन्डो दुईप्रकारको पाइन्छ । पहिलो प्रकारको चिन्डोको तल्लो भाग निकै फराकिलो र डल्लो हुन्छ । बिस्तारै माथि जानेक्रममा धेरै नै सानो हुँदै बीचमा केही फुकिएर फेरि सुलुत्त चुच्चोजस्तै परेको हुन्छ । यही भागमा काटेर मुख बनाइन्छ । यस्तो चिन्डोलाई राई बान्तावा भाषामा वाबुव वा फुब्चित नामले बोलाइन्छ । दोस्रो प्रकारको चिन्डो भने तल्लो भाग फुकेको र डल्लो हुन्छ । यो चिन्डो माथिल्लो भागतिर जाँदा पूर्णतः साँघुरो भई सुलुत्त भएर गएको हुन्छ । यसलाई राई बान्तावा भाषामा सोलोन्वा भनिन्छ । यी चिन्डोलाई भिन्न भाषी राईले भिन्न नामले बोलाउने गरिएको पाइन्छ ।
पारुहाङ र सुम्निमालाई किरात राई जातिले आफ्ना सृष्टिकर्ता भएको विश्वास गर्छन् । उनीहरू सृष्टिकर्ता पारुहाङ र सुम्निमाप्रति अगाध आस्था राख्छन् । सृष्टिकर्ता पारुहाङ र सुम्निमाको समयबाटै चिन्डोको प्रयोग किरात राई जातिमा हुँदै आएको कथन रहेको छ । तत्कालीन समयमा यसलाई पानी जम्मा गर्ने भाँडा, पानी उघाउने वस्तुका साथै विभिन्न चीजबिज राख्ने काममा प्रयोग हुँदै आएको थियो भन्ने भनाइ छ । आफ्नो सृष्टिकर्ताले नै प्रयोगमा ल्याएका थिए भन्ने विश्वासमा किरात राई जातिले चिन्डोलाई भिन्न र विशेष महत्व दिएका हुन् ।
चिन्डोलाई प्रयोगमा ल्याउन सर्वप्रथम छिप्पिएको चिन्डो हुनुपर्छ । छिप्पिएको चिन्डोको भेट्नोतिरको भागभन्दा एक वा दुई इन्च तल काटेर मुख निकालिन्छ । भित्रको कमलो भाग कुहिएर सफा हुन सकोस् र सजिलै बियाँ पनि बाहिर निस्कन पाओस् भनेर पानी हालेर महिना दिनजति राखिन्छ । पानी राखेको महिना दिनपछि त्यहाँभित्रको पानी र बियाँ निकालेर सफा गरिन्छ । यसपछि पनि त्यहाँबाट निस्कने गन्धलाई पूर्णतः हटाउन पुनः पानी राखेर केही दिनपछि फालिन्छ जसलाई राई बान्तावा भाषामा सेक्मा भनिन्छ । सेक्मा गरेपछि घाममा सुकाएर सुख्खा बनाई चिन्डोलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ ।
यो जातिले चिन्डोको प्रयोग गर्ने कामलाई सामान्य र विशेष गरेर दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । सामान्य कार्यअन्तर्गत पानी जम्मा गर्ने भाँडा, अन्न तथा अन्नको बीउलाई मुसा र कीरा लाग्नबाट बचाउन सुरक्षित राख्ने भाँडाका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । चिन्डोको डल्लो र फुकेको एकातिरको भागमा गोलो वा वर्गकारमा काटेर मुख बनाई पानी उघाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । पानी उघाउनका लागि चिन्डोबाट बनाइएको मुखलाई राई बान्तावा भाषामा एवाक भनिन्छ । त्यसरी नै रक्सी कोसेली बोक्न र खेतालापात आदि कामका लागि जाँड बोक्नका लागि समेत चिन्डो प्रयोग गरिन्छ ।
चिन्डोको विशेष उपयोगअन्तर्गत माङ अर्थात् पितृ पूजा गर्दा प्रयोग गरिने चिन्डो र पितृ अर्थात् विवाह कार्यमा प्रयोग गरिने चिन्डो भनेर दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । राईहरू पितृपूजा गर्दा सोलोन्वा चलाउने गर्छन् । सोलोन्वामा मर्चापानी वा पितृपूजा गर्नका लागि विशेष रूपमा बनाइएको कोदोको जाँड राखेर पितृलाई चढाउने गरिन्छ । यस्तो जाँड बनाउन र चिन्डोमा मर्चापानी वा जाँड राख्न घरको मुली महिलाले मात्र मिल्छ, अरूले मिल्दैन । मर्चापानी, जाँड वा रक्सी किरात राई जातिको पूजादिका लागि पवित्र वस्तु हुन् । निश्चित पूजाआजाका लागि निश्चित सोलोन्वा हुन्छ । एउटै सोलोन्वा सबै पूजामा चल्दैन । पूजाआजा सकिनेबित्तिकै सोलान्वा थन्क्याइन्छ । अर्कोपटक त्यहीँ पूजा गर्दा मात्र सो सोलोन्वा निकालेर चलाइन्छ ।
चिन्डोमध्येकै वाबुव वा फुब्चितलाई भने प्रीति कार्य अर्थात् केटी माग्ने कार्यमा प्रयोग गरिन्छ । विवाहका लागि कुरा मिलाउने मध्यस्थकर्ता कोङ्पी अर्थात् लमी केटी मगनी गर्न जाँदादेखि नै वाबुव वा फुब्चित चलाइन्छ । वाबुवमा रक्सी राखेर लगिन्छ । केटी माग्न पहिलोपटक कोङपीले एक वाबुव रक्सी लिएर गई केटीको बुवाआमालाई दिएर विवाहका लागि छोरी माग्न आएको जानकारी दिन्छन् । वाबुवको रक्सी केटीका बुवाआमाले स्वीकार गरेमा केटी दिन मञ्जुर भएको मानिन्छ । त्यसपछि बिहे समाप्त हुन्जेल गरिने हरेक रीत बुझाउन रक्सी राख्नका लागि वाबुव अनिवार्य हुन्छ । अन्य साधन वा भाँडाबाट रीतको रक्सी लान वर्जित हुन्छ । कसैले लगिहालेमा यसलाई मानमर्दन गरेको, हेपी काम वा अपमान गरेको मानिन्छ । यस्तो कार्यलाई राम्रो मानिँदैन र केटी दिने कार्य पनि असम्भव हुनपुग्छ । यदि केटीका बुवाआमाले कोङ्पीले लगेको वाबुवको रक्सी अस्वीकार गरेमा केटी दिन तयार नभएको पक्का मानिन्छ ।
किरात राई जातिले कुनै पनि काममा प्रयोग गर्ने चिन्डोलाई अन्य जातिले छुन मिल्दैन । पितृकार्यमा प्रयोग गर्ने चिन्डो सोलोन्वालाई घरको मुली मान्छे आमाबुवा र आमाबुवादेखि माथिका वृद्धवृद्धा बाजेबज्यै र माङ्पा (पितृ पुजारी) ले मात्र छुन मिल्छ ।
यदि घरको मुली महिला अन्य जातको परेमा वा घरको मुली महिला राई नै भए पनि अन्य जातको परपुरुषसँग लसपस परेपछि बिहे गरेर ल्याएको भएमा पनि छुन मनाही हुन्छ । त्यसरी नै घरका छोराबुहारी साथै केटाकेटीले पनि छुन मिल्दैन तर पितृकार्यमा प्रयोग हुने चिन्डो वाबुव भने किरात धर्मबाट अन्य धर्म परिवर्तन गरेको किरात राईबाहेकका अन्य राई जाति सबैले छुन मिल्छ ।
छुन निषेध गरिएको चिन्डो जथाभावी कसैले छोएमा पितृहरू बिटुलो हुने अनुभव किरात राई जातिमा रहेको छ । पितृहरू बिटुलो भएमा बिटुलो परिवार र बिटुलो बनाउनेको परिवारमा अशुभ र अफाप हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यस्ता अशुभ तथा अफाप कार्यमा अन्न, लक्ष्मी र बस्तुभाउ कुनै निहुँमा नोक्सान हुने हुन्छ भने परिवारको सदस्यमा विभिन्न रोग लागेर बिरामी हुने, घाउचोट लाग्नेदेखि ज्यानै जान सक्ने विश्वास रहेको छ । त्यसैले राई गाउँमा बसोबास गर्ने गैरकिरात राई जातिले उनीहरूले चलाउने चिन्डो छुन हुँदैन, राईको देवता लाग्छ भन्ने गर्छन् । यदि गैरकिरात राईले थाहा नपाएर छुन लागेमा राईहरू आफू अघि सरेर छुन दिँदैनन् । घरका छोराबुहारी र केटाकेटीलाई अग्रिम जानकारी दिइने भएकाले छुने आँट नै गर्दैनन् ।
यो जातिको सबैभन्दा ठूलो देवता भनेको नै पितृ हुन् । पितृहरू चुलामा रहन्छन् भन्ने विश्वास छ । त्यसैले हरेक कार्य गर्दा चुलामा आफ्ना पितृलाई पुज्ने चलन छ । छुनु हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै छोएमा मात्र होइन अन्जानमा छोइदिएमा पनि पितृले क्षमा दिँदैनन् भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले जानअन्जानमा यस्तो घटना हुन पुगेमा विपत्ति तथा दैवी घनाबाट बच्न तुरुन्तै पितृलाई चोख्याउँदै माफी माग्ने काम गर्नुपर्छ । पितृलाई चोख्याउन चिन्डोमा राखिएको मर्चापानी वा विशेष जाँँड अर्पण गर्दै भाले वा चल्लाको भोग दिनुपर्छ । यसपछि भने पितृ खुसी भई सन्तति तथा बिटुलो बनाउने मानिसलाई हानि गर्ने काम गर्दैनन् बरु रक्षा गर्न हरदम तयार रहन्छन् भन्ने विश्वास छ ।
किरात राई जाति विभिन्न थरमा विभाजित छन् । थरअनुसार भिन्न भाषा र भिन्न किसिमका अन्य संस्कार र संस्कृति रहेका छन् । यी संस्कार र संस्कृति कतिपय मिल्दा छन् भने कतिपय अमिल्दा छन् तर पितृपूजा, चुला, अदुवा र चिन्डो भने सबै किरात राई जातिमा समान रूपले पुजिने र चलाउने गरिन्छ । यस अर्थमा किरात राई जातिका यी मुख्य विशेषता हुन् भन्दा फरक पर्दैन । संस्कृतिका धनी किरात राई जातिका संस्कृतिको क्रमशः खोजी तथा अनुसन्धान गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । यस कामले राष्ट्रको गरिमामय सांस्कृतिक सम्पदामा खुड्किलो थप्ने काम गर्छ ।
भीसी विजेता कर्तव्यपरायण कर्णबहादुर
युद्ध आफैंमा राम्रो मानिँदैन । युद्धलाई कसैले मन पराउँदैनन् । तर, विश्वका अधिकांश मुलुकवासीले दुई–दुईपटकसम्म
तायामा–खियामाको आँसुले बनेको रावाखोला र तापखोला
उहिले–उहिले तायामा र खियामा नाम गरेका किराती दिदीबहिनी थिए । उनीहरूको भाइ हेत्छाकुप्पा थिए ।
अक्सर मान्छेलाई सहर पसेपछि आफ्नो गाउँठाउँबारे सोच्ने फुर्सद हुँदैन । पारिवारिक सुखसयलका लागि आवश्यकीय सम्पत्ति
रिमचिमको साखेवा रिसाउँदा पिखुवाखोला तेर्सैतेर्सो
उहिले–उहिले पिखुवाखोलासँग सुन्दर–सुन्दर झरना र थुप्रै–थुप्रै दहपोखरी थिए । पिखुवाखोलाले माझकिरातको थुप्रै जमिन सिँचेको थियो